हिउँको चिसोमा कविता, गजल, गीत र हाँस्यब्यँगले यसरी तात्यो वाशिङटन डिसी साहित्य सँगम ! - Enepalese.com
इनेप्लिज २०७४ पुष १६ गते २०:५६ मा प्रकाशित
हिउँले सेताम्मे थियो वाशिङटन डिसी । चिसो…. ओहो मुटु थर्काउने । तर पनि वाशिङटन डिसीका कवि र कवयित्री अनि कलाकार एक ठाउँँमा जुटे, अा आफ्न पालामा जुरुक्क उठे अनी शुरु गरे आ अाफ्ना कविता, गीत, गजल र हाँस्यब्यँग पस्किन । चार घण्टा लामो कार्यक्रम सकिएको कसैलाई पत्तै भएन । छिन छिनमा रचनाहरुले सबैलाई स्तब्ध पार्थे त छिनमै जुरुक्क उछाल्थे भने छिनमै हाँसोको बर्षा पनि हुन्थ्यो ।